''NUG၊ CRPH အား အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ အားမပေး''ဟုဆိုကာ သတင်းအတုဖြင့်စစ်တပ်ထောက် ခံသည့်ဘက်မှ ဝါဒဖြန့် - Myanmar Pressphoto Agency
DASSK FactCheck militarycoup MPA Myanmar News NUG
FactCheck September 19, 2021 ·0Comment
” NUG အစိုးရနှင့် CRPH လုပ်ရပ်များကို မနှစ်သက်ကြောင်း အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ ၄င်း၏ရှေ့ နေများမှတဆင့်ပြောကြားခိုင်းသည်ဟုဆိုကာ သတင်းအတုပြုလုပ်၍ စစ်တပ်ထောက်ခံသည့် ဘက်မှဝါဒဖြန့်မှုများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ” NUGနှင့် CRPHတို့၏လုပ် ရပ်များအား မသိရှိခဲ့ရကြောင်း၊ နိုင်ငံပိုင်အ ဆောက်အဦများ၊ လမ်းတံတားများအားဖျက်စီး ခြင်းများသည် ဖြေရှင်းပုံနည်းလမ်းမမှန်ကန်ကြောင်း၊ သူမ မသိဘဲလက်နက်ကိုင်လမ်းစဥ် လျှောက်လှမ်းနေခြင်းအပေါ်များစွာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းစေလိုကြောင်း” သူမ၏ရှေ့နေများမှ တဆင်​့ ပြည်သူ လူထုထံအမှာစကားပါးခိုင်းသည်ဟု ဆိုကာ သ တင်းတုရေးသားဝါဒဖြန့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
” ဒါမျိုးတွေ ကျွန်မတို့တဖွဲ့လုံး ဘယ်သူ့ကိုမှ အမေကပြောတာမျိုး တခုမှမရှိပါဘူး။ ဒါသက် သက် ဝါဒဖြန့်တဲ့ဟာပါ။ သတင်းအမှားပါ” ဟု အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ရှေ့နေတဦးဖြစ်သူ ဒေါ် မင်းမင်းစိုးက MPAသို့အတည်ပြုပြောကြားသည်။
စစ်ကောင်စီမီဒီယာ MWD၊ MRTV အပါအဝင် စစ်တပ်ထောက်ခံသည့်အသိုင်းအဝိုင်းဘက်မှ ယင်းကဲ့သို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သတင်းအမှားပြု လုပ်ဖြန့်ချီနေပြီး အဆိုပါသတင်းအမှားသည် စစ်တပ်ထောက်ခံသည့်အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ပျံ့နှံ့နေကာ ဝေဖန်မှုများရှိနေကြောင်း သိရသည်။
#State Counsellor #Fake News #FactCheck #SAC Military #MPA
Military Supporters’ Fake News Propaganda that State Counsellor Doesn’t Support ‘NUG, CRPH’
Military supporters are propagandizing by creating fake news that the State Counsellor had said through her lawyers that she didn’t like the activities of the NUG and CRPH.
The State Counsellor is quoted by the fake news propaganda to have said that she didn’t know the activities or the NUG and CRPH; destroying roads and bridges wasn’t the right way of solution; she was sad that armed resistance was chosen without her knowledge and that she wanted peaceful means of solutions,” in her message to the public through her lawyers.
“No one of us was told any of this by mother (Suu Kyi). This is sheer propaganda. Fake news,” confirmed by the State Counsellor’s attorney, Daw Min Min Soe, to MPA.
The military supporters including the MWD, MRTV have purposely made up the fake news and it is circulating around the military communities and has received criticisms.
#StateCounsellor #Fakenews #FactCheck #SACMilitary #MPA